Oovimba beDOGE - Iphepha 2 lesi-6
Ukuhlaziywa: 25 October 2021
Ukuhlaziywa: 21 October 2021
Izithuba zeDogecoin i-12% yeRally phakathi kweTweets ezixhasayo ezivela ku-Elon Musk
Uluntu lwememe lwe-meme lubone irali yamaxabiso kwangoko namhlanje, ngeDogecoin (DOGE) erekhoda i-12% spike. Okwangoku, ezinye iimali zemali ezinje ngeShiba Inu (SHIB), iBaby DogeCoin (BABYDOGE), iBabyFloki (BABYFLOKI), kunye nezinye ezininzi ezirekhodiweyo.
I-rally ehlaziyiweyo yaxhaswa ngumntu ngaphandle kuka-Elon Musk njengoko eqala kwakhona i-antic pump pump antics. UMusk, okwangoku osisityebi emhlabeni, uthumele uphawu lwe-meme yenja ephethe irokethi. Le tweet ibonakalise inkxaso yenkxaso yezigidigidi okanye "Biza isenzo" Iimali ze-meme, eziphendule njengoko bekulindelekile.
UMusk kamva wathumela i-tweet ukuba: “Ndiye ndacinga kwaye… andizisoli ngokugungqa ipati,” ebonisa ukuba uyazi ngokupheleleyo ngokungenisa i-tweet yakhe.
U-Dogecoin uqokelele kwi-0.237 yeedola kwangoko namhlanje ukuya kwi-intraday ephezulu ye- $ 0.272. Oko kwathethi, i-SHIB irekhode eyona ntsebenzo intle phakathi kwezinye iimemo zemali emva nje kokuthumela i-325% spike kwiiveki ezimbini ezidlulileyo.
Abahlalutyi baye baqinisekisa ukuba iimali zemali ziye zathandeka ngakumbi kubatyalomali njengemigangatho yabo yokwamkelwa kwehlabathi. Ngaphandle kuka-Elon Musk, amanye amanani abalulekileyo athumele i-tweet kwaye abonisa inkxaso yeempawu ze-meme kumaxesha akutshanje, eqinisa ngakumbi uluntu.
Ngobhengezo olubalulekileyo oludwelisiweyo kunye nama-echoes ezicwangciso zokuphinda zimisele uthungelwano lwayo, iDogecoin inokurekhoda inzuzo ebalulekileyo kwiiveki ezizayo.
Amanqanaba aphambili eDogecoin ukuba abukele-Okthobha 18
Ukulandela ukudityaniswa kwexesha elide ngezantsi kwenkxaso ye- $ 0.240, i-DOGE ekugqibeleni yaphule uxhathiso lwe-0.250, inyuka ngaphezulu koxinzelelo lwe- $ 0.270. Nangona kunjalo, ingqekembe yememe irekhode ulungiso oluncinci ukuya kwi-0.260 yemarko yokujonga amandla esithintelo se- $ 0.270.
Oko kwathethi, i-DOGE ingathumela intshukumo eqhubekayo kulo naliphi na icala kwiiyure ezizayo. Ukuhamba kwe-bearish ukuya kwinkxaso ye-0.225 yeedola yeyona ndlela inokwenzeka, kuthathelwa ingqalelo ukuba ipateni ephezulu (ngesiqhelo isibonakaliso se-bearish) ivele.
I-Dogecoin kufuneka yophuke ngaphezulu okanye izizinzise ijikeleze i-0.270 ephezulu yeedola ukuthintela ukubuyela umva kwe-bearish.
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 34.1 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 1.39%
IDogecoin (Doge) iguquka kuLuhlu oluQinisekileyo, ubuso bayo buchasene ne- $ 0.24
IDogecoin's (DOGE) Ixabiso lingaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kodwa ngaphantsi kwe-50-day SMA. I-altcoin iye yaguquguquka phakathi kwemilinganiselo ehambayo. Ukudodobala kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aphule ngezantsi kwe-21-day SMA. Ngokufanayo, i-uptrend iya kuphinda iqale kwakhona, ukuba amaxabiso aphula i-SMA yeentsuku ezingama-50. Ukusukela nge-6 ka-Okthobha, i-avareji ezihambayo azikaphulwa. Namhlanje, uDogecoin ufumene inkxaso ngaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA njengoko i-altcoin iqala phezulu.
I-DOGE ikwinqanaba lama-50 leSalathiso saMandla esiNxulumene nesiKhokelo sexesha lama-14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-2, ixabiso le-DOGE likwi-uptrend. Umfutho wokuqhubela phambili uqhekekile ngaphezulu komndilili wokuhamba. Nangona kunjalo, i-uptrend yagqitywa kwinqanaba le-0.24 yeedola. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-14 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE izakuvuka kodwa ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba leedola 0.2455.
Ixabiso le-DOGE lingaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 ezibonisa ukunyuka okungaphezulu kwengqekembe. I-DOGE ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwi-bearish umfutho. Umndilili oshukumayo uthambele phezulu ukubonisa uptrend
UDogecoin ulungiso olusezantsi. I-altcoin iye yaguquguquka phakathi kwe- $ 0.22 kunye ne- $ 0.26 kwiveki ephelileyo. I-crypto iya kuhamba xa amanqanaba abophelelweyo ephuliwe.
I-Dogecoin (DOGE) Rallies Stall kwi $ 0.25 ephezulu, i-Uptrend ayithandabuzeki
Ixabiso likaDogecoin (DOGE)e inyuke yaya kwi-0.25 yeedola emva kokophula ngaphezulu kwe-21-yosuku lwe-SMA kodwa yaqiniswa ngezantsi kwe-50-day SMA. Abathengi abanakukwazi ukugcina amaxabiso e-DOGE ngaphezulu kweentsuku ezingama-50 zeSMA. Ngamanye amagama, ixabiso le-DOGE alinakwaphula ngaphezulu koxinzelelo lwe- $ 0.28. Ukuqhutywa kwe-bullish kuqale nge-29 kaSeptemba eqhekeze ngaphezulu kwesezantsi kunye ne-21-day SMA. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaqhekeka ngaphezulu kwe-0.28 yeedola yokuxhathisa, iDogecoin iya kuba kwindawo yokuqhubela phambili kwaye iya kuphinda iphinde ibeke i-0.32 ephezulu.
I-crypto inyuke yaya kwinqanaba lama-60 leNdawo yamandla esihlobo sexesha lama-14. Ibonisa ukuba i-altcoin ikwindawo ye-uptrend kwaye inako ukunyukela phezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
Kwitshathi yeyure e-1, ixabiso le-DOGE liphule ngaphezulu komndilili ohambahambayo. Ixabiso libambekile kwi $ 0.25 ephezulu. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukunyuka okunyukayo kwengqekembe. Ngeli xesha, ngo-Okthobha 7 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba leedola 0.26.
Ixabiso le-crypto lingaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 ezibonisa ukunyuka okungaphezulu kwengqekembe. I-DOGE ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Ikwasondela kwingingqi ethengiweyo. Ukuqhubela phambili ukuya phezulu kuyathandabuzeka njengoko abathengisi bevela.
IDogecoin iya kuqhubeka nokunyuka ngamandla xa amaxabiso eqhekeza ngaphezulu kwe- $ 0.28 ephezulu. Nangona kunjalo, ukunyuka okuphezulu akuthandabuzeki njengoko ixabiso lifikelela kummandla ogqityiweyo. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kunyuka iye kwi-0.26 ephezulu yeedola